မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၂ ရာသီပတ်လုံး ပွဲတော်များနှင့်ပြည့်နေသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လအလိုက်တွင် သက်ဆိုင်ရာပွဲတော်များကို ကျင်းပကြပါသည်။ ပွဲတော်အများစုသည် ဘာသာရေးကိုအခြေခံကာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်မှာလည်း မြန်မာပွဲတော်များ၏ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပွဲတော်များ၏ နောက်ခံရာဇ၀င်သမိုင်းကြောင်းများသည် ဘာသာရေးနှင့် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းဖြင့် ဆက်နွယ်နေတတ်ကြပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပွဲတော်အသီးသီးသည်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကာလကြာမြင့်လှပြီဖြစ်သည့် ဓလေ့ထုံးစံ၊ ယဉ်ကျေးမှုများကို ထင်ဟပ်နေသည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပွဲတော်များအပေါ်တွင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကလည်း ဂုဏ်ယူကြမည်မှာ ဧကန်မလွဲ ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၀ါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်၊ မိုးလေကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် ဟူသော စကားများသည် မြန်မာလူမျိုးတိုင်းနှင့် ရင်းနှီးနေပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ၀ါတွင်းသုံးလပတ်လုံး ၀ါကပ်တော်မူခဲ့ကြသော ရဟန်းသံဃာများအနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ၀ါထွက်တော်မူကြပြီဖြစ်ပါသည်။ မိမိသွားလိုရာ ခရီးများကို သွားလာနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ လူငယ်လူရွယ် ချစ်သူရည်းစားများအဖို့လည်း မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်များဖြစ်သည့် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်နှင်းရန် အချိန်အခါသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပျော်ရွှင်နေကြမည်မှာ သေချာပါသည်။ မိရိုးဖလာယုံကြည်မှု ဓလေ့ထုံးစံအရ ၀ါတွင်းကာလအတွင်း အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြရသဖြင့် ၀ါကျွတ်ကာလသီတင်းကျွတ်သည် ချစ်သူရည်းစားတို့အတွက် အိပ်မက်နှင့် စောင့်မျှော်ခဲ့ရသည့် အချိန်အခါဖြစ်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
သီတင်းကျွတ်၏ အထိမ်းအမှတ်သရုပ်မှာ မီးထွန်းပွဲတော် ကျင်းပခြင်းဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ဆီးမီးရောင်တို့ဖြင့် ထိန်ထိန်လင်းနေမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်တိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၊ မြို့တိုင်း၊ နယ်တိုင်းတွင် မီးရောင်စုံများဖြင့် လှချင်တိုင်းလှနေသည့် အချိန်အခါပင် ဖြစ်ပါသည်။ အလင်းရောင်သည် လူသားတို့အတွက် အားအင်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆီမီးရောင်တထိန်ထိန် လင်းနေသော သီတင်းကျွတ်ကာလသည် မြန်မာလူမျိုးတို့အဖို့ အားမာန်များ ပြည့်ဝနေသည့် လတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်က ဆိုချင်ပါသည်။ ဆီမီးထွန်းခြင်းဓလေ့ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းမှာလည်း ဘာသာရေးနောက်ခံကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည် ၀ါတွင်းကာလပတ်လုံး တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိ မိခင်တော်စပ်ခဲ့ဖူးသော သန္တုဿီတနတ်သားကို အဘိဓမ္မာတရားတော်များ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် လူ့ပြည်သို့ ပတ္တမြားစောင်းတန်း၊ ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်းတို့ဖြင့် ပြန်လည်ဆင်းသက်တော်မူသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုသို့လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်တော်မူလာချိန်တွင် လူနတ်ဗြဟ္မာတို့သည် အလင်းရောင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပူဇော်ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါဓလေ့ကို ယနေ့အထိ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ကာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွလာသော မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ ဆီမီးရောင်စုံထွန်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားရပါသည်။
သီတင်းကျွတ်လတွင် ပြုလုပ်ကြသော မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အထူးခြားဆုံး ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတစ်ရပ်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစသည်တို့ကိုအမှူးထား၍ သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားများ၊ မိဘဆွေမျိုးများ၊ အထက်အကြီးအကဲ၊ ဆရာသမားများကို ကန်တော့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘယ်တုန်းက စတင်ခဲ့သည့်ယဉ်ကျေးမှုမှန်း မသိသော်လည်း သီတင်းကျွတ်ကာလသည် ကန်တော့ပစ္စည်းများ လှိုင်လှိုင်ရောင်းချရသည့်ကာလ ဖြစ်သည်ကတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်ကာလတွင် သားသမီးတို့အနေဖြင့် အဘိုးအဘွားများ၊ မိဘများ၊ ငယ်ရွယ်သူများအနေဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သည့် ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ အထက်အကြီးအကဲများ၊ ဆရာသမားများကို ကန်တော့ကြပါသည်။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံဖြင့် ပြစ်မှားမိခဲ့သည်များရှိပါက ခွင့်လွှတ်ကြပါရန် တောင်းပန်၍ ကန်တော့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကန်တော့ခံများကလည်း ခွင့်လွှတ်ကြောင်းပြောကြား၍ ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပေးခြင်း၊ မုန့်ဖိုးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည့်ဓလေ့သည် လွန်စွာချစ်စရာကောင်းသည့် မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်လူမျိုးများတွင်မှ ထိုကဲ့သို့ယဉ်ကျေးမှုကို မတွေ့မမြင်ရပါ။
အယူအဆအရပြောရလျှင် သီတင်းကျွတ်ကာလသည် မိုးလေကင်းလွတ်ကာ ရာသီဥတု သာယာစပြုလာသည့်အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ တိမ်ညိုတိမ်မည်းတို့ဖြင့် ခြယ်လှယ်ခဲ့သော ကောင်းကင်ပြင်သည် အပြာရောင်နောက်ခံနှင့် လှချင်တိုင်းလှနေသည့် အချိန်ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများ၏ စိတ်သည်လည်း ကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းနေပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၊ ၀န်ထမ်းများအတွက်လည်း သီတင်းကျွတ်ကာလသည် အချိန်အတန်အသင့် အနားရသည့်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် စိတ်လက်ပေါ့ပါးကာ တက်ကြွလန်းဆန်းနေပါလိမ့်မည်။ ကြည့်လေရာပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးရောင်စုံများဖြင့် လင်းလက်နေသည့်အတွက် မြင်ရသူအဖို့ အားအင်များပြည့်ဝကာ ရွှင်မြူးနေပါလိမ့်မည်။ အလင်းရောင်သည် လူတို့၏ အားကိုးရာ မဟုတ်ပါလား။ မိမိ၏ မိဘဘိုးဘွားများ၊ ဆရာသမားများကို တောင်းပန်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်ထဲတွင် ဒေါသ၊ လောဘများ ကင်းလွတ်ကာ ငြိမ်းအေးနေပါလိမ့်မည်။ ထို့အတူ မိမိကို လာရောက်ကန်တော့ကြမည့် ငယ်ရွယ်သူများ၊ တပည့်သားမြေးများကိုကြည့်ပြီးလည်း ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှု၊ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မှုတို့ဖြင့် ပျော်မျက်ရည်တို့ ဝေ့နေမည့်အချိန် ဖြစ်ပါသည်။ လူငယ်များအတွက်လည်း ကျောင်းပိတ်ရက်၊ ရုံးပိတ်ရက် အနားလည်းရ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများကိုလည်းဆင်နွှဲ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် ခရီးသွားလာခြင်း၊ အာစရိယူပူဇော်ပွဲများကျင်းပခြင်းတို့ဖြင့် မအားရအောင် အလုပ်ရှုပ်နေပါလိမ့်မည်။ ဘ၀တစ်ခုကို နှစ်ယောက်အတူ ထူထောင်ကြတော့မည့် ဇနီးမောင်နှံလောင်းများအတွက်မူ ပြောစရာမရှိပြီ။ ကြိုတင်မျှော်တွေးကာ ပြင်ဆင်ခဲ့သမျှ အခုအချိန်တွင် လက်တွေ့ကြုံနေရ၊ ဆောင်ရွက်နေရလေပြီ။ အနာဂတ်အတွက် စိတ်ကူးတွေအပြည့်ဖြင့် အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်နေသည့်အချိန်ဟု ဆိုရပေမည်။
ထို့ကြောင့် သီတင်းကျွတ်ကာလသည် မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် အကုသိုလ်စိတ်များ ကင်းစင်ကာ ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်၊ ၀မ်းသာပီတိအပြည့်၊ အားမာန်အပြည့်၊ တက်ကြွမှုအပြည့်ဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများ လွှမ်းခြုံနေသည့်ကာလတစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း ရေးသားမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သော မိဘနှစ်ပါး၊ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အားကိုးရသည့် ဆွေးမျိုးသားချင်းများ၊ တတ်မြောက်စရာအဖြာဖြာကို သင်ကြားပြသပေးခဲ့သည့် သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာအပေါင်း၊ ထိတွေ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ရသည့် ကြီးငယ်ရွယ်တူ လူအမျိုးမျိုးတို့အား ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံတို့ဖြင့် ပြစ်မှားကျူးလွန်ခဲ့သည်များရှိပါက တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့သော စာများတွင် စော်ကားသလို၊ ရိုင်းစိုင်းသလို ဖြစ်သွားခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါကလည်း လာရောက်ဖတ်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည့် ဘလော့ဂ်ဖတ်သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအား တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ရေးသူနာမည်မသိလို့ မဖော်ပြနိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ် ..........
စာရေးသူ/ လမင်းငယ် /နေ့စွဲ/ Saturday, October 08, 2011
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ..
မိန်းကလေးတွေအတွက်ရေးပြီး ယောင်္ကျားလေးအတွက်ပါ ရေးရင်ကောင်းမယ်လို့ 
စဉ်းစားမိတာနဲ့လမင်း သိသလောက်လေး ရေးကြည့်မယ်နော်။
တကယ်ဆို မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးရှိအောင်တော့
ယောင်္ကျား မိန်းမဆိုတာ ပညတ်ထားတာပါ လူရယ်လို ဖြစ်လာရင်တော့ သူနေရာနဲ့သူ
ငါတို့က ယောင်္ကျားလေးပဲ ထောင်အပြင် တန်းမရှိဘူးလို့ ပြောကြတာ လမင်းကြားဖူးတယ်ရှင့် အဲလို ပြောတဲ့သူတွေကိုတော့ အသိညဏ်တော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ တွေးမိတယ်။။
ငါတို့ ကယောင်္ကျားလေးပဲ ရှုပ်ချင်သလို ရှုပ်မယ် လုပ်ချင်တာလုပ်မယ် နေချင်သလိုနေမယ် ပြဿနာ မရှိဘူး။
ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမထားစေချင်ဘူးကိုယ့်ကိုတိုင်းကကောင်းအောင်မနေရင် ကောင်းတဲ့သူနဲ့လည်းတွေ့ ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။
တစ်နေ့ ကိုယ်တကယ် ချစ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ လာရင် ကိုယ့်ပဲခံစားရမှာမလား တွေ့ တဲ့သူကို
ချစ်တယ်ပြောလို့ရတယ် ငါတို့ကယောင်္ကျားလေးပဲဆိုတာမျိုး စိတ်ထဲမှာလုံးဝမထားသင့်ပါဘူး နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တ ရတက်ပါတယ်။။
တစ်ခုရှိသေးတယ် ယောင်္ကျားလေးအများစုပေါ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး အရက်
သောက်တက်ကြတယ် .အသည်းကွဲလို့ ကောင်းမလေးနဲ့ အစဉ်မပြေလို့တဲ့
ညစ်နေလို့ ဆိုတာမျိုးတွေ ကြားဖူးပါတယ်။။
ဒီပြဿနာတွေကို အရက်နဲ့ဖြေရှင်း တော့ရော အစဉ်ပြေသွားရောလား ။
ဘာမဟုက်တဲ့ အကြောင်းလေးနဲ့ အရက်သမားဖြစ်သွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။
လမင်းအထင်ကတော့ အသိညဏ်မဲ့ တဲ့အလုပ်လို့ပဲထင်မိပါတယ်။
ဘာပြဿနာနဲ့ ပဲ ကြုံကြုံခေါင်းအေးအေးထားဆုံးဖြတ်ပါ လို့ပဲအကြံညဏ်ပေးချင်ပါတယ်။
ခက်တာက မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေ ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ဟေ့ကောင်းဘာဖြစ်နေလဲ
အသည်းကွဲနေလို့ပါ။ လာကွာ ဒါဆို သွားချလိုက်ရအောင်ဆိုတာမျိုးတွေ အရက်သောက်
အဲတော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ကအတုယူမှားကုန်ကြတာပေါ့ အသည်းကွဲရင်အရက်သောက်ရမယ်ဆိုတာ မျိုးဖြစ်နေကြပြီး လမင်းပြောချင်တာက
အများကြည့်မဲ့ ရုက်ရှင် ဗီဒီယို တွေမှာထဲက အတတ်ကောင်းတွေ ပြနေတော့ ဘာမှ
သေချာ စဉ်းစားမူမရှိတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေဟာ အတုယူမှားကုန်ကြတော့တာပါပဲ။
တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရက်တွေပါ မြန်မာပြည်တဲ့ အရက်ဆိုင်ကများနေတယ်။ တရားဝင်တာရော မ၀င်တာရော အရက်နှိင်ငံကိုဖြစ်ရောပဲ။။
တစ်ခုရှိတာက နှိင်ငံခြားကဘာလုပ်လဲ အကုန်လိုက်လုပ်တာ မကောင်းတာဆို ညနေ့
ရောက်လို့ ဘီးယာဆိုင် သွားကြတာကလ္ဘရည်ဆိုင်သွားကြသလိုမျိုး ဖြစ်နေကြပြီး။။
လမင်းသိသလောပြောကြည့်မယ်နော် နှိင်ငံကြီးတွေမှာ အရက်လို့ဘာလို့ကို တွေ့ ဆုံပွဲတို့
ပျော်ပွဲ နစ်သစ် ပွဲတို့လောက်ပဲ သောက်ကြတာများပါတယ်။။
အလာကားနေ အရက်မသောက်ကြပါဘူး အလုပ်နားရက်တွေ အပန်းပြေကြပါတယ်။။
နှိုင်ငံခြားကလူတွေက မကောင်းကြဘူး အကျင့်ပျက်ကြတယ်ပေါ့ သူများတွေကို
လမင်းဆို့နိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနှိင်ငံဖြစ်လို့ အရက်သေရည်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှာကို
မအပ်စပ်ပါဘူး စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ.။။
တကယ်တမ်းလည်း အမျုိး်ကောင်းသမီးရှင်ဘက်ကလည်း အမျိုးကောင်းယောင်္ကျားလေးတွေကိုပဲရွေးကြတာပါ ..ကိုယ်တိုင်းကကောင်းမှာကောင်းတဲ့
အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေနဲ့ တွေ့ ကြတာပါ။။
ငါတို့ကယောင်္ကျားလေး ဘယ်သူကို (Q ) ကျု ပြဿနာ မရှိဘူးလို့ပြောတက်ကြပါတယ်။
စေတနာလေးနဲ့ ပြောချင်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ အဲလို မိန်းကလေးမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
တန်းဖိုးရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ ချင်ရင် တန်ဖိုးရှိအောင် အရင်နေပါ တန်းဖိုးရှိလာရင် တန်ဖိုးရှိ
တဲ့သူနဲ့ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။။
အမျိုးကောင်း မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို အကောင်းဆုံးကိုပဲရွေးချယ်
ကြပါတယ် မိန်းမကောင်းလေးများနဲ့တွေ့ ချင်ကြပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုတိုင်းကောင်းအောင်နေကြပါလို့ လမင်းပြောချင်ပါတယ်။။
သိလို့ တက်လို့ ရေးချင်းမဟုက်ပါ စေတနာနဲ့ရေးချင်ပါ။။
အားလုံး နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်။။ ဆရာလုပ်ခြင်း မဟုက်ပါ။။
ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာ သက်သတ်ပါ.. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။
လမင်းကို အချိန် တိုင်း နှိပ်စက်နေတဲ့ သူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ??
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေး ကျန်းမာပျော်ရွင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။။။
သယ်ချင်းတို့ လမင်း ကို အချိန်တိုင်း နှိပ်စက် နေတဲ့ သူကို သိချင်ကြရောပေါ့နော်။။။
ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ လမင်းချစ်တဲ့ သူတွေလည်းလား???
လမင်း စိတ်လေးအရမ်းကို ပင်ပန်းခဲ့ရတာပါ သူ့ ကြောင့်ပေါ့လို့ ထင်ခဲ့တာပါပဲလေး
တကယ်တော့ လမင်းကိုအချိန်တိုင်း နှိပ်စက်နေတာတော့ သူတို့တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
လမင်းရဲ့စိတ်လေးပါပဲ။
စိတ်ဆိုတာက အတော်လေးကို နက်နဲလွန်ပါတယ် ဒါကိုမသိကြတဲ့ လမင်းတို့တွေက ဘယ်သူကြောင့်ဘယ်ဝါ
လူတွေဟာ သနားစရာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ် စိတ်ကူးယဉ်ပြဿနာတွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။
ကိုယ့်စိတ်က ဖန်တီးထားတဲ့ ပြဿနာကို စိတ်ကဖန်တီးထားတာလို့အမှန်အတိုင်းမသိတော့ ပျောက်အောင်
ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရနိုင်ဘူး။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတော့ ဘာမဟုတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ပြဿနာ အစစ်တွေချည်းပဲထင်နေကြတာမလား။
လူ့ ဘ၀မှာ တွေ့ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာ တော်တော်များများဟာ စိတ်ကဖန်တီးထားတာပါ။
စိတ်ဆိုတာက မရှိတာကို အရှိဖြစ်အောင် လုပ်တက်တာမလား။
လူတွေဟာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်မသိဆုံးပဲ။ တကယ်တော့ လမင်းတို့က သူများအကြောင်းကိုပဲ
သိချင်ကြတာလေး ကိုယ့်အကြောင်းတော့ သိဖို့ တစ်ခါမှာမစဉ်းစားဖူးဘူးမလား။
လမင်းလည်း မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး ။ တကယ်တော့ လမင်းတို့တွေဟာ စိတ်ခိုင်းသမျှ အားလုံးကိုလျှောက်
အဲတော့ လမင်းတို့တွေ ကိုယ့်နဲ့နီးကပ် နေတဲ့ စိတ်ဆိုတာကို သေချာကြည့်ကြရအောင်နော်။။
စိတ်အကြောင်းကိုသေချာသိသွားရင် စိတ်က ခိုင်မာ ရင့်ကျက်လာမယ်၊ အေးချမ်းလာမယ်၊ တည်ငြိမ်လာမယ်။
အရာရာတိုင်းကိုစိတ်ကလွှမ်းမိုး တယ် ၊စိတ်ကိုတကယ်သိသွားရင် စိတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုး ချုပ်ချယ်တာ နှိပ်စက်တာမခံရတော့ဘူး။
ကိုယ်ကို အနှိပ်စက်ဆုံးက သူတစ်ပါးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ပဲ ဒါကြောင့် သူ့ အကြောင်းကို မသိရင်ခက်မယ်။။
ကဲသယ်ချင်းတို့ရေး လမင်းတို့တွေ စိတ်လေးကို သိအောင်ကြိုးစားကြရအောင်နော်။
ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ တံခါးဝမှာ သတိဆိုတဲ့ အစောင့်လေးရှိဖို့ လိုတယ် ။ စိတ်လေးကို သတိလေးနဲ့ စောင့်ကြည့်
ဒီလောက်ဆို လမင်းကို အချိန်တိုင်း နှိပ်စက်နေတဲ့ သူကို သိလောက်ရောပေါ့နော်၊ လမင်းတို့တွေက
လိုချင်တာ မရလို့စိတ်ညစ်တယ် ။ ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်တော့ ဒေါသထွက်တယ် ။ ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရလို့
စိတ်ဆင်းရဲ ကြရတယ် တကယ်တော့ သူတို့ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး အဓိက က ကိုယ့် နဲ့ အနီးဆုံး ရန်သူက
ကိုယ့် ရဲ့ စိတ်လေးပါပဲ ။ ဘယ်သူ့ ကြောင့်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးနော်။
လမင်းကို မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်တာလဲ သူပဲ ၀မ်းနည်းအောင်လုပ်တာလဲ သူပဲ အခုတော့ သိသွားပြီး
လမင်းသူ့ ကို စောင့်ကြည့်နေမယ် ။ ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ သူငယ်ချင်းတို့ သိကြရောပေါ့နော်
သတိလေးနဲ့ စောင့်ကြည့်ယုံပါပဲ ။
ကဲသယ်ချင်းတို့ရေး စိတ်လေးကို လမင်းတို့ တွေသတိလေးနဲ့ စောင့်ကြည့်ကြမယ်မလား ။
လမင်း စိတ်အရမ်း ညစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့ သတိနဲ့ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်သိ စာအုပ်လေး
ဖတ်မိပါတယ် စိတ်လေးအရမ်းကို အေးချမ်းသွားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုလည်း လမင်းလို အေးချမ်းချင်းလို့ 
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေး ကောင်းသောနေ့လေးပါနော် လမင်းစိတ်လေးအရမ်းကိုရှုပ်
ထွေးနေတာနဲ့ ပို့စ်မရေးဖြစ်ဘူး ။ စိတ်ညစ်တာ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ဒီအကြောင်းရေးရင်ကောင်းမယ်
အကြံရတာနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ လမင်းကအပြင်သူငယ်ချင်းမရှိတော့ လမင်းပို့စ်ဖတ်ပေးတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေကိုအရင်နီးဆုံး မိတ်ဆွေလို သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လိုအပ်တာလေးတွေ အကြံညဏ်များပေးနိုင်ပါတယ် ။လမင်းလက်ခံပါတယ်၊ စကားပြောစရာဆိုလို့
ဒီသူငယ်ချင်းတွေပဲရှိတာဆိုတော့ ခင်မင်မူတိုင်းကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။
စကားရှည်သွားပြီး ထင်တယ် .ခင်မင်မူတိုင်းကစကြတာပေါ့နော်.
အဖော်ငတ်တော့ လူတိုင်းကို ရိုးသာစွာ ပွင့်လင်းမူနဲ့ အရိုးသားဆုံးခင်တာပါ။
အခုလမင်းရင်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာကတော့ လမင်းအကြောင်းကို ပုတ်ခတ်ပြီး လမင်းရဲ့ သိက္ခာကိုထိပါး
လာတဲ့ စကားတွေကို သူများတွေ ကိုပြောတာပါပဲရှင်. လမင်းသိသိချင်ဒေါသအရမ်းထွက်တာ
အသားတွေကို တုန်နေတာပဲ ရင်တစ်ခုလုံးလည်း ပူနေတာပဲ အဲညက လမင်းတစ်ညလုံးအိပ်လို့ မရဘူး။
စရင်းရှင်းမယ်ပေါ့ ပြောတဲ့သူရော ပြဿနာကိုစတဲ့ သူရောပေါ့။ လမင်းကမနက်လင်းရင်အမြဲတမ်း
တရားနားတယ် ။အဲနေ့က တရားဘယ်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ဘာမှလည်းစားလို့မရ အိပ်လို့မရ
ပူလောင်လိုက်တာ ပြောတဲ့ သူတွေကိုလည်းမေးလ်ပို့ပေါ့ စရင်းရှင်းမယ်တက်လာခဲ့ပေါ့။
အဲညကပူလောင်ခြင်းမျိုးလမင်း သက်သတ်မကြုံဖူးဘူးတကယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့ သူက တက်မလားဘူး
ငါဘာလုပ်ရမလဲ ငါဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေတာလဲ သေချာပြန်စဉ်းစားတယ်။
ငါ့ကို အခုလိုပြောတာ ငါတစ်ခါရှုံးနေပြီး ဒါကို နင့်ကထပ်ပြီးသူတို့ပေးတဲ့ အပူတွေကိုယူနေအုံးမယ်ဆိုရင်း
ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမရင်းဘာမဟုတ်တာကို နင့်ဘာလို့အဟုတ်လုပ်နေတာလဲ အခုလိုဖြစ်နေတာ
နင်လက်ခံထားလို့ နင့်ကလက်မခံရင်သူတို့တွေဘာပဲပေးပေး ဘာပဲပြောပြောအခုလိုဖြစ်စရာမလိုဘူး။
နင်စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါ ဘာအကျိုးရှိလို့ လဲ နောက်ဆို သူတို့နဲ့ ကင်းကင်းနေလိုက်ပေါ့။။
အဲဒါနဲ့ လမင်းတရားနားဖို့ရှာလိုက်တယ် ဆရာတော်ဦးဆေကိန္ဒ တရားနားလိုက်တယ်။။
တရားနာမည်က မပူခင်လောင်မှန်းသိတဲ့ ဆရားတော်ပြောသွားတာတော့စုံနေတာပဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရှာပြီး
နားထောင်ကြည့်ပါ အရမ်းကောင်းပါတယ်။စိတ်လည်းအရမ်းအေးသွားတာ ဆရာတော်တွေကို
လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခုတော့ရှိတာပေါ့နော် သိပြီးမလုပ်နိုင်ရင်မသိသေးလို့ပါတဲ့ လမင်းလည်း
ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဘယ်သူပေးတဲအပူကိုမှာ လမင်းတို့ တွေလက်မခံရအောင်နော်။။
လမင်းတို့ ဘယ်သူပေးပေး မယူရအောင်နော်၊ပေးတိုင်းမယူပါနဲ့ နော်၊စိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်ပေါ့။
လမင်းစာလေးကိုအချိန်ပေးဖတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ စိတ်ထဲတစ်ခုခုကျန်နေခဲ့ မယ်လို ထင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။နောက်လည်းလမင်းတွေ့ ကြုံနေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ
ကို တရားသဘောလေးနဲ့ ရေးသွားချင်ပါသေးတယ်။ ဖတ်ချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ လဲမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါမှလဲ လမင်းရေးရတာအားရှိမှာပေါ့နော် ..အမှားပါရင်သီခံဖတ်ပေးပါ...
သစ္စာ တရား ပြုလိုက်မယ်မောင်.
ကျန်မချစ်ခဲ့ တာ လိမ်ညာမူ မပါ
မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ တာပါ.......
ဤ မှန်ကန်သော သစ္စာတရားကြောင့်.....
မောင်အား အမုန်းများသာ ဖြစ်ရပါစေ.........
မသိခဲ့ ပါဘူး ဘယ်တော့မှာလဲ
အနိုင်ယူချင်းစိတ် မရှိခဲ့ ပါ
ဤ မှန်သော သစ္စာ တရားကြောင့်..
ကျန်မ ရင်ခွင် မှာ ပူလောင်နေသော
ကျန်မအချစ်နဲ့ မထိုက်သောသူနဲ့ လွဲရပါစေသား.....
ကျန်မသည် ထိုသူအား မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ခဲ့ ပါသည်
လိမ်ညာလှည့်စားလို ချင်းမရှိခဲ့ ပါ......
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေး ပျော်ရွင်သောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
် လမင်းပြောချင်တာကတော့ အတော်များများလည်းပညာပေးအနေနဲ့ရေးဖူးကြပါတယ်။
လမင်းကတော့ ကိုယ့်တွေ့ လေရေးချင်နေတာရှုပ်လိုက်ပုံများပေါ့။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ လမင်းကပိုစ့်လေးတွေရေးတယ် မိတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုပါတော့
ခက်တာက တစ်ချို့ ကရိုးသားကြပေမဲ့တစ်ချို့ကြပြန်တော့လဲ တွေ့ တာနဲ့ ချစ်တယ် ကြိုက်တယ်။
ဆိုတာမျိုးတွေလေး ခက်တာကလမင်းပေါ့ လူတိုင်းကို ခင်တက်တာ အားလုံးကိုအရိုးသားဆုံးပဲခင်တယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် လမင်းခင်တက်တယ် ပွင့်လင်းတယ် ဘယ်သူကိုမှာမညာခဲ့ဖူးသလို ဘယ်သူကိုမှာ
လဲအကောင့်လိုက်မတောင်းဖူးဘူး လာအပ်ရင်လက်ခံပေးတယ်၊ ခင်ချင်လို့ အကောင့်လေး လက်ခံပေးပါဆို
ပြဿနာကစတာပေါ့ ယောင်္ကျားလေးများပေါ့ တွေ့ တဲ့သူ ကျုကြတယ် သူတို့ကောင်းမလေးတွေလည်း
သိရော သူတို့ အတင်းအကောင့်တောင်းလို့ ပေးရတာပါဖြစ်ကုန်တာပဲ ။
တစ်ခုတော့ပြောပါရစေ .ကိုယ်ချင်းစာပါ နှမချင်းစာနာပါ။
ကိုယ်မှာချစ်သူရှိတယ်ဆို သစ္စာရှိကြပါ ။အကျိုးဆပ်က ၀ဋ္ဋ်လည်တက်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ 
ရှုပ်ကုန်ပြီးပြောချင်တာကဘယ်ရောက်ပြီးလဲမသိတော့ဘူး အဲလိုနဲ့ပေါ့နော် လမင်းချက်ဘောက်ထဲ
လာပါလား ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ် ဆိုတော့ ရောင်လည်လည်နဲ့ရောက်သွားပါလေးရောရင်...
ချက်ဘောက်ထဲရောက်တော့ ယောင်္ကျားလေးများ အတင်းနာမည်ပေးအကောာင့်တောင်းပေါ့
တစ်ချို့ မိန်းးကလေးများကျတော့လည်း လည်ကြပါတယ်။လမင်းပြောချင်တာက မလည်ရင်တော့
မသွားကြပါနဲ့လမင်းလိုခံရမှာဆိုလို့ပါ ။။
လမင်းအားနာတက်တယ် ခင်တက်တယ် ပွင့်လင်းတယ် အားလုံးကို ကိုယ့်စိတ်လိုပဲသဘောထားပြီး
ဆက်ဆံတက်တယ် ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းနဲ့တော့ မတန်ဘူး ဒါကလဲ နောက်ကျမှာ သိလိုက်ရတာပါ။
ချက်ဘောက်မှာ ချက်ကြ ရန်ဖြစ်ကြ ဆဲကြ တည့်တုန်းကလဲသူတို့တွေပဲလေး နောက်လည်း လမင်းကြောက်
မသွားဖြစ်ပေမဲ့ ပြဿနာကပြီးသွားလာဆိုတော့ မပြီးသေးဘူးရှင် လမင်းကိုချက်ဘောက်ထဲမှာ လိုက်ခေါ်ကြ
တယ် ပျောက်နေလို့ ရှာတာပေါ့ရှင် ဒါနဲ့ လမင်းအကောင့်ထဲကတစ်ယောက်က နင့်ကိုရှာနေကြတယ် .
ပြန်လာပါ ပေါ့ မလာချင်တော့ပါ ဘူး ငါ သူများတွေလိုလဲစကားပြောမတက်နဲ့ နင့်ကိုတော့ခင်ကြပါတယ်။
လာပါပေါ့ မလာဘူးဆို မလာတော့ပါဘူး တစ်နေ့ တော့ အဲတစ်ယောက်က ချက်ဘောက်မှာပြဿနာဖြစ်
ကြတယ်ပေါ့ မိန်းကလေးတစ်ဖွဲ့ နဲ့တဲ့ သူတို့ ဖြစ်တဲ့ ပြသနာကို လမင်းကို ဆွဲထည့်ကြတာပါပဲလေး။
ရှုပ်လိုက်ပုံများလေး အွန်လိုင်း ချက်ဘောက်ဆို အသံတောင်းမကြားချင်တော့တာလေး
လမင်းပြောချင်တာက အချိန်တွေပေးရတယ် ပိုက်ဆံတွေကုန်တယ် ဒါကို ဘာကြောင့် အကျိုးရှိစွာအသုံးမချပဲ
ဘာမဟုတ်တာတွေ နဲ့ အချိန်ကုန်နေကြတာလဲပေါ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လဲ ဘာမှာကိုမဟုတ်တာပါ။
လမင်းမှာဒေါသတွေထွက်ရတာနဲ့ ငိုရတာနဲ့ အခုပြန်စဉ်းစားကြည်ရင်ရယ်စရာဖြစ်နေတာလေး။
အွန်လိုင်းဆို တာ နည်းပညာတွေ ဗဟသုတတွေ ရှာကြပါ အများကြီးပါ သုံးလို့မကုန်နိုင် ပညာယူလို့မကုန်နိုင်ပါ
တစ်ချို့ ကလည်းရှိသေးတယ် အသက်ကိုမှာအားမနာပေါ့ ချက်ကြရန်ဖြစ်ရနဲ့ တကယ်ကို ရှက်စရာလေးလို့
ပြန်စဥ်းစားကြပါ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းရှာပါ နည်းပညာတွေ ယူပါ ။
ကိုယ့်နဲ့ မသိကြပဲ ချစ်သူရှာကြ ရန်ဖြစ်ကြနဲ့ ရှက်တက်ရင် သေဖို့ သာကောင်းပါတော့တယ် ။
အရင်ကလည်း လမင်းအဲလို အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ ပါတယ် ၀န်ခံပါတယ် ။
အခုတော့ လမင်း ဘယ်သူနဲ့ မှာ မချက်တော့သလို ဘယ်သူအကောင့်မှာလည်းလက်မခံတက်တော့ပါဘူး။
သင်ခန်းစာရသွားတာပေါ့ နောင်တ လည်းရပါတယ် လမင်းဘာလုပ်လုပ်နောင်တဆိုတာမရှိခဲ့ ဘူး။
အွန်လိုင်းလောကမှာတော့ လမင်းအကြီးမှာဆုံးနောင်တရခဲ့ ပါတယ်။။ အခုတော့ အဲသင်ခန်းစာနဲ့ပဲ
ပြောချင်တာလေးရှိပါသေးတယ် လမင်းမာနလုံးဝမကြီးပါ အကောင့်မပေးတာနဲ့ ခင်ချင်လို့ အကောင့်
အပ်ပေးပါပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းများ နားလည်ပေးပါ တောင်းပန်ပါတယ် ။
လမင်းကခင်တက်လို့ ကို မအပ်တော့ပါဘူးလို့ ပြောရင် လမင်းစားလေးကိုဒီကနေပဲရပ်လိုက်တော့မယ်နော်
လမင်းစာလေးတွေ ဖတ်ပေးတာ ကွန်မန့်လေးတွေပေးကြတယ်ဆို လမင်းသူငယ်ချင်းတွေကြီးပါပဲ
ဆိုဒ်ထဲမှာ ပဲတွေ့ ကြတာပေါ့နော် အမှားသည်းခံဖတ်ပေးးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့ ရေး ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ........
လမင်းအခုတလောကြားကြားနေရလို့ ပါ ၊ စိတ်ထဲတကယ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်
အရမ်းလည်း ၀မ်းနည်းတာပဲ။ ဘယ်လိုမှ လမင်းမထင်ထားလို့ ပါ။
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အရက်သောက် ဘီယာသောက်ကြတာ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ အပြိုင်ဆိုပဲ။။
လမင်းတော့ ကိုယ်တိုင်းမတွေ့ ဖူးပါဘူး မောင်လေးတစ်ယောက်ပြောလို့ ပါ ။
မမ ဘာသိလို့ လဲ အခုမြန်မာပြည်က မိန်းခလေးတွေ အရက်သောက်ကြတာ မဆန်းတော့ဘူးတဲ့ မယုံနိုင်စရာပါ ။
ပြောသေးတယ် မောင်လေးက( vzo )ချက်ရင်းလဲ ကောင်းမလေးတွေက မပေါ်တပေါ် ၀တ်ထားပြီး
မဖွယ်မရာ တွေ လုပ်ပြတယ်ဆိုပဲ ဟုတ်လို့ လာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ၊ မမ မယုံဘူးလား ကျန်တော်တို့ ချက်
ရင်မမကို ပြမယ် အကောင့်ပေးမယ် ချက်ကြည့်တဲ့လမင်းလည်း မယုံတယုံနဲ့ မချက်ပါဘူးလို့ 
ဒါဆိုကျန်တော်တို့ ချက်ရင် ပြမယ်တဲ့နင်တို့ ဟာက မြန်မာမိန်းကလေးဟုတ်လို့ လား။။
ဟုတ်လိုက်တာမှာ ဒါဆို နင့်တို့ ကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာလို့ အဲဒါတွေလျှောက်ကြည့်နေရတာလဲလို့ မေးတော့
သူတို့ တောင်ပြသေးတာပဲ မမရဲ့ ကောင်းကြသေးရဲ့ လားရှင် .မကြားရက် စရာပါပဲရှင်။။
လမင်းလည်းရှက်ရှက်နဲ့ နောက် အဲဒါတွေလျှောက်မကြည့်နဲ့ ကြားလားလို့အင်းပါ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ 
မယုံလို့ သူလည်းကြည့်မိတာပါတဲ့ကျန်တော်တို့ မြန်မာ မိန်းခလေးတွေ အခုလိုဖြစ်တာ စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့
သူတို့ မိန်းမယူရင် အတော်ရွေးရမယ်ဆိုပဲ ။ ကဲ မိန်းခလေးများရေး ကြားကြတယ်နော်။
ခေတ်ကြီးဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်နေပါစေ မြန်မာမိန်းခလေးဆို တာမေ့မထားကြပါနဲ့ ရှင်...
တိုးတတ်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို လိုက်တာလဲလိုက်ပါ ကောင်းတာလေးတွေအတုယူရပါ..
ကိုယ့်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမူနဲ့ ဘယ်လိုမှာ မအပ်စပ်တဲ့ အပြု အမူတွေတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ ရှင်......
ကိုယ့် လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံ ရဲ့ ချစ်စရာ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ထိန်းသိမ်းကြပါ ရှက်တက်ပါ
အရှက် အကြောက် တရားလေးထားကြပါလို့ မေတ္တာရက်ခံပါတယ် ..
စကားလုံးရိုင်းရင်နားလည်ပေးကြပါ စေတနာနဲ့ ပါ။
ဘယ်လိုမှာ မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကျန်မတို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနိုင်ငံမှာ အခုလို ဖြစ်နေရတယ်ဆို တာ တကယ်ကို
စိတ်မကောင်းစရာပါ..အဆိုးဆုံးက မြန်မာပြည်ကို ကိုးရီယား ကားတွေရောက်လာတာပါပဲ။။
မင်းသမီးတွေက မင်းသားတွေကို ချစ်စကားအရင် စပြောကြတယ်ဆိုပဲ ခက် တာက မြန်မာလူမျိုးတွေက
မကောင်းတာဆို အကုန် အတူယူကြတာပဲ အ၀တ်အစာ တွေလည်း သူတို့ ဘာဝတ်လဲလိုက်ဝတ်ကြတော့
တာပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ လိုက်တဲ့ အ၀တ်အစာတွေအများကြီးပါ ။။ ခေတ်မှီပြီလုံခြုံတဲ့ အ၀တ်အစာလေးတွေလည်းရှိပါတယ် ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ လိုက်တဲ့ အ၀တ်အစာလေးတွေရွေးဝတ်ကြပါ။
ခေတ်မမှီလို့ ဂုဏ်သိက္ခာမကျနိုင်ပါဘူး ကိုယ့်ရိုရာ ၀တ်စုံလေးကိုလည်း ခေတ်နဲ့ အညီ ၀တ်ရင်လည်းလှပါတယ်
ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီတာကို ပဲတွေးပါ နိုင်ငံတကာကို ရင်ပေါင်တန်းတယ်ဆိုတာ ကို လမင်းလက်ခံတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် .ကိုယ်ကမြန်မာ မိန်းခလေးဆို တာမမေ့ကြပါနဲ့ မြန်မာချစ်စရာစိတ်ဓာတ်လေးတွေ
အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို စောင့်ထိန်းကြပါရှင် မြန်မာယောင်္ကျားလေးတွေကလည်း သူတို့ သာ ကြည့်ချင်း
ကြည့်မယ် သူတို့လက်တွဲမဲ့ သူကိုတော့ အပြစ် အကင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်းကြပါတယ်။
ဘ၀လက်တွဲဖော်ကောင်းနဲ့ တွေ့ ချင်းကြတယ်ဆို ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားကြပါ ကိုယ့် မျိုးနွယ် ယဉ်ကျေး
မူကို မမေ့ကြပါနဲ့ ကမ္ဘာ မှာ မြန်မာဆို တာ ရိုးသားတဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေချစ်စရာ အမူအကျင့်လေးတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။
ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းကြပါလို့စေတနာရှေ့ထားပြီး အမုန်းခံရေးလိုက်ပါတယ်။။
နားလည်ပေးနိုင်ကြပါစေ... အမှားပါရင်သည်းခံဖတ်ပေးကြပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။
သူငယ်ချင်းတို့ရေး မင်္ဂလာပါနော် လမင်း ဒီတစ်ခါယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးဘယ်သူပိုမြတ်လဲ
ရေးကြည့်မယ်နော် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့စိတ်လေးနဲ့ အသိလေးတွေကိုလည်းလမင်းသိချင်ပါ
လမင်းသူငယ်ချင်းယောင်္ကျားလေးတွေက သူတို့က ပိုမြတ်တယ်ကြီးလုပ်နေလို့ရှင်............
လမင်းလည်းဘယ်ခံနိုင်မလဲနော် မြတ်အောင်နေရင်မြတ်ပါတယ်လို့အမြဲ ငြင်းရတယ် လမင်း ကငယ်ငယ်လေးထဲက
ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းပဲထားတာများတယ် သူတို့အကြောင်းကို အကောင်း အဆိုး အကုန်နီပါ ပြောကြတယ်
လမင်းလည်းသိရတာပေါ့ အကျင့်မျိုးစုံ စရိုက်အဆုံး နဲ့ပေါ့.......ကဲထားပါတော့ လိုရင်လေးစလိုက်ရအောင်နော်...
အမှန်တော့လေး အမျိုးသားဖြစ်စေ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်တွေးခေါ်တက်သူ..
သူ့အကျိုးစီးပွား ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား သူ့ဘက် ကိုယ်ဘက် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်အောင် ပြုလုပ် ပြောဆိုတက်သူ
အမျိုးသား ဖြစ်စေ အမျိုးသမီး ဖြစ်စေ ယခုလို သာသနာတော်နဲ့ ကြုံတုန်း မှာမဂ်ဖို နိဗ္ဗာန် ရကြောင်းတွေ
ကျင့်နိုင်ကြမယ် ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကောင်း အဆိုး ဆင်ခြင်နိုင်မယ် သီလရှိသူ အသိညဏ် အကျင့် စရဏ
ရှိသူဟာ မြင့်မြတ်သူ စိတ်ထား ကောင်းမွန်သူ ချီးမွမ်းအပ်သူ လို့ လမင်း ထင်ပါတယ်...
နောက်ပြောကြတာရှိသေးတယ်.... မိန်းကလေးဖြစ်ရတာ သူတစ်ပါးဇနီးကို ပြစ်မှားမိလို့ အဲဒီ အကုသိုလ် တွေအကျိုးပေးလို့
ဖြစ်ရတာလို့လဲပြောကြသေးတယ် ...မိန်းမရှာတွေကတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နှိုင်ပါတယ် ဟီဟီ သိရင်တော့ မေတ္တာပို့ ခံထိမယ်...
လမင်းဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲကတော့ အမျိုးသမီးတို့ဟာ ဒါန သီလ ဝေယျာဝစ္စစတဲ့ ကောင်းမူတွေကိုပြုပြီး အမျိုးသမီးဘ၀ကို နစ်သက်
လိုတဲ့ဆန္ဒ ကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ လမင်းလည်းယုံကြည်တယ်.......
အမျိုးသမီးဘ၀ကိုပဲတောင်တလာတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပါသမိ ဖြည့်ဘက် ယသော်ဓရာ ဆိုလည်း ဘ၀ဆက်ဆက်
အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ မြတ်အောင်နေရင် မြတ်ပါတယ် လို့လမင်းပြောချင်တာပါရှင်....
အဓိက တော့ မိန်းကလေး ဖြစ်စေ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်စေ ကောင်းမူ ကုသိုလ် များပြုလုပ်ပြီး
မကောင်းတာမှန်သမျှ ရှောင်နှိုင်ကြမယ်ဆို အားလုံးမြတ်သောသူများသာဖြစ်ပါတယ်....
လူမှန်ရင် အသိညဏ်ရှိမယ် တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ အသိညဏ်ရှိမယ်ဆို မြတ်သောသူများပဲဖြစ်ပါတယ်
လို့ လမင်းထင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ထင်မင်ချက်လေး လည်းသိချင်ပါတယ်......
အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွင် အေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ..........................အသိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ကုသိုလ်ကောင်း
အမျိုးအစား/ ရသ ဗဟုသုတ
သူငယ်ချင်းတို့ရေး လမင်းရဲ့ ခံစားချက်လေးပေါ့နော် သူငယ်ချင်းတို့လည်းစိတ်ထားတက်ေ
အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ဈေးနှုန်းကအကုန်တက် မတက်တာဆိုလို့ လမင်းလစာပေါ့ ဟီဟီ...
စိတ်ဓာတ်မကျဘူးလားဆို ကျတာပေါ့ မေးတက်လိုက်တာ လမင်းသူငယ်ချင်းတွေဆို စီးပွားရေးသမားတွေလေး
လမင်းကတော့လခစာပေါ့ လမင်းလည်းသူများတွေလို သူဌေးမကြီးဖြစ်ချင်တာပေါ့...
လူဆိုတာက သူအကြောင်းသူလာတာမလား ငါလစာလေးနဲ့ ပင်ပန်းလိုက်တာလွန်ရော လုပ်တာရနဲ့ ရတာနဲ့
မကိုက်ဘူး သေချင်တာပဲလို့ လမင်းသူငယ်ချင်းတွေတော့ အမြဲပေါက်ပေါက်ဖောက်ကြတာပဲ.....
လမင်းကတော့လေး တစ်ခါမှအဲလိုမတွေးမိဘူး ငါနဲ့တန်လို့ရတာ ငါလုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုငါ စေတနာထားလုပ်မယ်....
တာဝန်ကျေအောင်လုပ်မယ် ဘာလုပ်လိုက်လို့ ဘာပြန်ရ မယ်လို့ မတွေးမိဘူး တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း လမင်းလည်း
လူထဲကလူပဲလေး ဈေးနှုန်းတွေကတက် လစာကမတက်ဆိုတော့ တက်တဲ့လစာကလည်း ဈေးနှုန်းကိုလိုက်မမှီနိုင်ဘူးရှင်....
အလုပ်ထွက်လိုက်ရကောင်းမယ်လို့လည်း တွေးမိတာပေါ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်ကတောင်းလစာရနေသေးတယ်..
အလုပ်မရှိတဲ့ သူတွေ ကိုယ့်ထက် လစာနည်းတဲ့ သူတွေကို ပြန်ကြည့်ပါအုံ တွေးတက်ရင်အားနားဖို့အတော် ကောင်းနေပြီး..
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှာ အားလုံးအစဉ်ပြေရမယ် သူများတွေတောင်လုပ်နိုင်သေးတာပဲ ငါတို့ကြမှ တို့ဆိုတာ ပူလောင်လွန်ပါတယ်...
သူအကြောင်းနဲ့ သူလာတာပါ ဒါနဲ့ ထိုက်လို့ ဒါပဲရတာပါ အဲတော့ရှင် လမင်းပြောချင်တာက ရှိနေတဲ့ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့
အလုပ်အပေါ် စေတနာထားလုပ်ပါ ပင်ပန်းတယ်လို့ မတွေးပါနဲ့ လောကမှာ ကိုယ့်ထက်ဆိုးတာတွေအများကြီးပါ နေတက်အောင်နေကြည့်ပါ
လောကကြီးကတရားပါတယ် လူတွေကမတရားတာပါ နေတက်ရင်ကျေနပ်စရာကြီးပဲဆိုတဲ့ စကားကရှေ့လူကြီးတွေ အလာကားသုံးခဲ့တာ
မဟုက်ပါဘူး ဘုရားဟောပါ.. လူတစ်ယောက်မှာ ရည်မှန်းချက်တွေ အနာဂက်တွေ ရှိရပါတယ်....
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့တန်ရာကိုပဲမှန်းစေချင်တယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေတွေးပြီး ဖြစ်မလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျ ဘာမှာလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့လောက်
အောင်ဖြစ်တက်တယ် ဖြစ်မလာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုလည်း ထားတက်ရတယ် အကောင်းဆုံးကိုတွေးထားသလို အဆိုးဆိုတာကိုလည်းတွေးထား
တက်ရပါတယ်.... လမင်းမေမေဆိုအမြဲပြောတက်တယ် သမီးလစာလေနဲ့ကျေနပ်နေတာပဲနော် မကျေနပ်တော့ရော ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ
ဟုက်တယ်မလား ကိုယ့်မတက်နိုင်တာကိုတော့လမင်းက စိတ်ပင်ပန်းမခံပါဘူး လမင်းကိုသူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ် ...
သူမှာ လောဘမရှိဘူး တဲ့ လူပဲရှိတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ လမင်းနေတက်တာပါ စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံး အေးချမ်းအောင်ထားတယ်...
ဘယ်တော့မှာ ကိုယ့်ထက်သာတာ မကြည့်ဘူး ကိုယ့်နဲ့ နှိမ့်ကျ တဲ့သူတွေကိုပဲ ကြည့်တယ် ကိုယ်နဲ့သာတဲ့ သူတွေဟာ အတိတ်ကဘာကောင်း
မူတွေပြုခဲ့လို့ ကိုယ့်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာမသိပဲနဲ့ သူတို့လို ဖြစ်ချင်နေလို့ကတော့ စိတ်ပင်ပန်းယုံပဲရှိတာပေါ့ ...
အခုဘ၀မှာ လမင်းကတော့ အတက်နိုင်ဆုံး တက်နိုင်သလောက်လှူဖြစ်ပါတယ် လမင်းကြိုက်တဲ့ စကားလေးရှိတယ်....
အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့လည်း သိချင်ရင် အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်တဲ့ အနာဂတ် ဘာဖြစ်မလဲသိချင်ရင် အခုဘာလုပ်နေတာဆိုတာကြည့်ပါတဲ့......
လမင်းအဲစကားလေးအတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ် စာရှည်သွားပြီးထင်တယ် သူငယ်ချင်းများအသိတိုးစေရန်
ရည်ရွယ်ပါတယ် လိုအပ်တာ များရှိရင် တောင်ပန်းပါတယ်....
လမင်းစေတနာလေးနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးရေးဖြစ်တာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေတ်ကာလကိုက ရတာနဲ့ ကုန်တာမမျှတော့ဘူးလေး..
ဒါကိုစိတ်ပင်ပန်းနေမဲ့အစား နေတက်ပါ စိတ်ထားတက်ပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ရင်လေးနဲ့ပါ......
သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ လမင်း ငြင်းလိုက်ကြရအောင်နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတလောကြားကြား
ဇာတ်လမ်းတွေကြောင့် လမင်းဒီပိုစ့်လေး ရေးဖြစ်တာပါ.....လမင်းအပြင်မှ သူငယ်ချင်းသိပ်မထားဘူး..
အွန်လိုင်းမှာတော့ သူငယ်ချင်းများတယ် များတယ်ဆို လာအပ် ကြတာလေး သိတယ်မလား မိန်းကလေး
အကောင့်ဆို ကိုတော်တို့ကရအောင်ရှာနိုင်ကြတယ် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းကြတော့ လမင်းကရှာရတာပေါ့ရှင်...
ဒါကလည်းဖြစ်တက်တဲ့သဘောလေးပေါ့ .....ပြောချင်တာက ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းများတယ် လမင်းနဲ့
ငယ်တာရှိတယ် ကြီးတာရှိတယ်... အသက်နော် ...:P
သူတို့ အကြောင်းကိုအကုန်ပြောတဲ့သူရှိသလို မပြောတဲ့ သူလည်းရှိတာပေါ့ တိုင်ပင်ကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်...
အခုတလောကြားနေရတဲ့ သတင်းကတော့ မမရယ် ညီမရယ် ယောင်္ကျားလေးတွေများ သစ္စာမရှိဘူး ရက်စက်ကြတယ်တဲ့...
ဇာတ်လမ်းကစပြီးနော်....အစ်မတစ်ယောက်ဆို သူကောင်းလေးနဲ့ ချစ်လာတဲ့ သုံးနစ်ရှိပြီးတဲ့ ကောင်းမလေးငယ်ငယ်လေးနောက်ပါသွားလို့
စိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ မမလမင်း ညီမလေးသူကိုအရမ်းချစ်တာ ဘာလို့ ညီမကိုထားခဲ့ ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကို
တွဲတာလဲတဲ့ တစ်ယောက်ကရှိသေးတယ် ငါနဲ့သူကအွန်လိုင်းမှာတွေ့ တာတဲ့ အပြင်မှာတွေ့မယ်လုပ်တော့မလာဘူးတဲ့လေး ချစ်ခဲ့ကြတာတစ်နစ်
ဆိုလာပဲ စာရှည်မှာဆိုလို့ ကျန်တာတွေမပြောတော့ဘူးနော် လမင်းစဉ်းစားကြည့်မိတာပေါ့နော် ငါအကောင့် ထဲမှာ မိန်းကလေးနဲ့
ယောင်္ကျားလေးကများပြီးတော့ အသည်းကွဲလို့ခံစား နေတဲ့ အကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲရှိတာ အံအော်လို့ ပါ......
တစ်ချို့ကောင်းလေးတွေကရှိသေးတယ် မမဘာသိလို့လဲတဲ့ မိန်းကလေးတွေကရက်စက်မှာတော်ခါကြတာဆိုပဲ..
သူတို့ကောင်းမလေးတွေကိုလည်း အမြဲညာတယ် လမင်းဆီ မိန်းကလေးအကောင့်ရှိရင်ပေးပါလားမမ ကြူရအောင်တဲ့..ကဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ အကိုတို့ရေးးးးးးးးးးးးးးး။...............
သူတို့များရည်းစားထားချင်ရင်တော့ မမအဲကောင်းမလေးကအရင်ရည်းစားရှိတယ်တဲ့ မိန်းကလေးများကြတော့ချစ်မိပြီးဆို လမင်းရယ်..
သူတို့အရင်ကရည်းစားရှိခဲ့တာ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး အခုဟာက ငါနဲ့ချစ်ပြီးမှာ ရှုပ်နေတာတဲ့ တစ်ခါတလေးများ ငါကိုရှိတယ်လို့တောင်မထင်ဘူးတဲ့....
အရမ်းခံစားရတယ် လမင်းရာ ငါဘာလုပ်ရမလဲ သူကိုလည်းအရမ်းချစ်တယ် လမင်းကစိတ်အချဉ်ပေါက်လို့ ပြောလိုက်တယ် ...
ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာမရှိတာ လမ်းခွဲလိုက်လို့ ပြောရင် ငါသေလိမ့်မယ်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆိုလေး လမင်းကိုတွေ့ရင်အမြဲငိုတာ
ဟုက်တာပေါ့လေး မင်္ဂလာဆောင်ဖို့တွေတောင်စီစဉ်ထားကြတာလေး ချစ်ခဲ့ကြတာလဲ သုံးနစ် သုံးမိုးမလား ယောင်္ကျားလေးတွေများ
ပြောကြသေးတယ် မိန်းမတွေကရက်စက်တယ်တဲ့ မိန်းကလေးရက်စက်တာ ယောင်္ကျားလေးရက်စက်တာအစွန်ဖျားလောက်ပဲရှိတာပါ....
ဘာလို့အဲ လိုပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားကယောင်္ကျားလေးတွေထက်နုညံလို့ပါ.. ခံစားလွယ်တယ် ခံနိင်ရည်
စွမ်းအားက ယောင်္ကျားလေးတွေလောက် ပါမလားခဲ့ကြဘူးလေး မေတ္တာတရားကြီးမာတဲ့ မိခင်လောင်းတွေမလား သူတို့ ရက်စက်တယ်
ထားအုံတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေလောက်တော့ ရက်စက်မယ်မထင်ပါဘူး သူရည်းစားကိုလမ်းခွဲလိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်..
ရက်စက်တယ်လို့တော့ပြောမှာပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ သူကပြောတယ် မမရယ် ညီမလေးသူကိုအရမ်းချစ်ပါတယ် အခုထိလည်းချစ်နေ
သေးပါတယ် သဘောထားချင်မတူကြလို့လမ်းခွဲလိုက်တာပါတဲ့ ဒါကိုယောင်္ကျားလေးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ကောင်းမလေးက
ရက်စက်တာပေါ့နော်.... မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါ... သူတို့အချစ်ကို တန်ဖိုးထားပါ.. နားလည်းပေးကြပါ..
မရက်စက်ကြပါနဲ့လို့ လမင်းဒီပိုစ့်လေးကနေ တောင်ပန်းပါတယ် လမင်းကြားကြားနေရတာစိတ် မခံစားနိုင်တော့လို့ပါ .....
သူငယ်ချင်းတို့ရေး လမင်း အလုပ်ချိန် နားနေရင် အတွေးလေးရလို့ ဒီပိုစ့်လေး ရေးဖြစ်တာပါ........
နားချိန်တောင် ကောင်းကောင်းမရလိုက်ပါဘူး ဟီဟီ သနားမလားလို့ပြောကြည့်တာပါ..
မသနားလည်းရပါတယ် လမင်းစာလေးဖတ်လို့ အကျိုးရှိတယ် အသိတစ်ခုရရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်..........
(၁) အချိန်ကို သုံးတာ...
(၂)အချိန်ကို ဖြုန်းတာ ..
(၃) အချိန် ဆုံးတာ လို့သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ လမင်းဖတ်ဖူးပါတယ်.........
လမင်းတို့ အချိန်ကို ဘယ်လို တန်ဖိုးရှိအောင် သုံးမလဲ လမင်းရေးကြည့်မယ်နော်
အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပါ အကျိုးရှိတာ တစ်ခုခု လုပ်ပါ ငါ ဖြတ်သန်း လာတဲ့ သက်တန် တစ်လျှောက်ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ.....
ငါ အတွက် ငါ့ မိသားစု အတွက် အများအတွက် သာသနာအတွက် လူမျိုး ဘာသာ ရေးရင်တော့စာရှည်မှ ဆိုလို့ ပါ...
သူငယ်ချင်းတို့ ပဲဆက် တွေးပေးပါ ....
အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ် အပေါ်မှာ ကျေနပ်မူရှိရက်လား စေတနာထားလုပ်ဖူးလား သွားရင်လာရင်ရော ဘာတွေ အကျိုးရှိအောင်
လုပ်ဖူးလဲ.. ကုန်ဆုံးခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေမှာ ရောကျေနပ်မူရှိရက်လား ...လမင်း အမေးလေးတွေပဲရေးသွားပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့
လမင်းနဲ့ သိတဲ့ တက်တဲ့ သူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပါ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ပဲ ရေးတာပါ........
ဆရာလုပ်ချင်မဟုက်ပါ စေတနာလေးနဲ့ လမင်းရေးတာပါ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်...
အချိန်ကို ဖြုန်းတာတော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး အခုခေတ်ဆို အင်တာနက်ခေတ် ဆိုတော့ (ချက်တင်) တို့ ( ချက်ဘောက်)
တို့မှ ပဲအချိန်မဖြုန်းစေချင်ဘူး ဆိုဒ်တွေ ထဲဝင်ရင်လည်း ဗဟုသုတ ရမဲ့ စာမျိုးတွေ နည်းပညာ တွေ လေ့လာ ရင်ကောင်းတာပေါ့နော်..
အင်တာနက်သုံးတာ အကျိုးရှိ အောင်လုပ်ရင် အများကြီးပါ ဒါပေမဲ့ လမင်းတွေ့ နေကြတယ် အခုခေတ် လူငယ်တွေ ကြူဖို့လောက်ပဲ..
အချိန်ကို ဖြုန်းနေသလိုပဲ မိဘအတွက် အချိန်ပေးပါ အဘိုးအဘွားအတွက် အချိန်ပေးပါ.. အကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာ သုံးစေချင်ပါတယ်...
အသက်လေးရလာရင် အချိန်တွေ ဆုံးသွားတာကို နောင်တမရစေချင်လို့ပါ... လူဘ၀ရခဲ လှလို့ အချိန်ကို မဆုံးစေချင်ပါဘူးရှင်......
အနည်းဆုံး တနေ့ကို တရားတစ်ပုဒ်လောက်နားယူနိုင်ရင် ကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးရတာပေါ့ နော် တရားအသိလေးရှိလာရင်
လောကဓံရဲ့ အနိမ့် အမြင့်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွား ဖြတ်သန်း နိုင်ပါတယ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေမှာ တန်ဖိုးရှိတာလုပ်တာရင်
ရင့်ကျက်စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါတယ် စာများများဖတ်ပါ အကျိုးရှိမဲ့ စာ ဗဟုသုတရမယ် စာ မျိုးပေါ့..
အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် သုံးပါ မဖြုန်းပါနဲ့ မဆုံးပါစေနဲ့လို့ လမင်း ဒီပို့စ်လေးကနေ သတိပေးလိုက်ပါတယ်....
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမရင် သူငယ်ချင်းတို့ ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..........
အချစ်ဆိုတာ ငါနဲ့ အတော်လေးကို အလှမ်းဝေးခဲ့တာပါ..
ငါအလုပ် နဲ့ ငါဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်တွေကလွဲလို့ ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားတဲ့
ပျော်ရွင်မူတွေ ဂရုစိုက်မူတွေနွေးထွေးမူတွေ နဲ့ ထပ်တူပေါ့........
အချစ် ဆိုတာကြီးကို ခံစားတက်လာ ခဲ့တယ် ...
ကြည်နူး မူနဲ့ထပ်တူ ပျော်ရွင်ခဲ့တယ်.........
အချစ်ဆို တဲ့ အရာကြီးကို ငါနဲ့ နီးစပ် ခွင့်တွေ ပေးခဲ့တယ်....
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ငါ ယုံကြည် ဖတ်တွဲ ထားချိန်မှ
နင့် ငါ နားမှာ မရှိတော့ဘူး..........
အချစ် ဆိုတာကို ဖက်တွဲ ရင်း အလွမ်းနဲ့ ငါဘ၀ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်....
ဒါလာနင့် ပြောခဲ့တဲ့ အချစ်..........
အလွမ်းဆိုတာကို ဆုပ်ကိုင် လို့မရပေးမဲ့
ငါရင်မှာ ဒု နဲ့ဒေး ပါ..........
အလွမ်းတွေကို အဖော် ပြုရင် နေ့ည တွေကို ဖြတ်သန်းလာလိုက်တာ...
င့ါကိုယ် ငါတောင် ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး ချစ်သူရေးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒါလာ နင့်ပြောခဲ့တဲ့ အချစ်ဆိုတာ...........
သူငယ်ချင်းတို့ကို လမင်း မေတ္တာပို့ချင်းနဲ့ ပက်သက်တာလေး ပြောပြချင်ပါတယ်....
လမင်းဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလိုမျိုးတွေ မေတ္တာပို့တာနဲ့တော့မကင်းကြပါဘူး သိရှိကြသလို
မေတ္တာပို့ဖူးတဲ့ သူတွေလည်းအများကြီးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံကြ တဲ့အခါ
မေတ္တာတရားပါမှ နစ်သက် မြတ်နိုးမူရှိကြပါတယ်။။။။။။
ဒါပေမဲ့ စိတ်ထားလေးတွေနည်းနည်း လွဲနေကြလာလို့ပါ... မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာ အပြောနဲ့မေတ္တာတရားကများနေလာလို့ပါ..
သတ္တ၀ါတွေ ကျန်းမာကြပါစေ ချမ်းသာကြပါစေ ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ လို့ ပါးစပ် ကသာ အမြဲရွတ်ဆို တက်ကြတာများပါတယ်။
အလုပ်လေးပါ ပါးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ရှင်.. လူအချင်ချင် လှည်ပက်ချင် ကင်းဝေကြပါစေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကဦးအောင် လိမ်လည်နေကြ
တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ လူတိုင်းမဆိုလိုပါဘူး အများအားဖြင့် လမင်းတွေ့ နေရတယ် ..။။
မေတ္တာပို့ရချင် ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မလိမ်တမ်းမေးကြည့်ပါ ၊ သတ္တ၀ါတွေအပေါ်တကယ်ပဲမေတ္တာစိတ်ထားနိုင်လား။
ကိုယ်လိုရော ချမ်းသာစေချင်လား အန္တရာယ်တွေကရော ကင်းလွတ်စေချင်တာလား ကိုယ်လိုပဲ အေးချမ်းစေချင်လား ။
တကယ်သာ ဖြစ်စေချင်တာမှန်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အန္တရာယ် အများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲချင်မျိုးတွေ ကမ္ဘာကြီးမှ ဘယ်ဖြစ်ကြတော့မလဲ
ဘယ်သတ္တ၀ါ မှ ဘေးရန်ဒုက္ခ မျိုးမတွေ့ ချင်ကြပါဘူး ကိုယ်လည်းမတွေ့ ချင်ဘူးမလား။
ဒါကိုများလေး လူတွေကဘာလို့များ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အမုန်းပွားနေကြရတာလဲ ပါးစပ်ကသာ မေတ္တာပို့နေကြတာပါ လက်တွေ အလုပ်ကြတော့
လူသားအချင်းချင်း မေတ္တာ စိတ်နဲ့နေကြမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာ မြင်လိုက်ရတာနဲ့ သနားကြင်နာစိတ်တွေ
အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကူညီချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတာပါ ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်လိုဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့တော့ မေတ္တာမပို့စေချင်ပါဘူးရှင်...
သတ္တ၀ါအားလုံး တူညီသောစိတ်ထားနဲ့ မေတ္တာပို့ပါ တက်နိုင်သလောက် ကူညီကြပါ။။
အမှန်တကယ် သတ္တ၀ါတွေကို ကျန်းမာ ချမ်းသာစေချင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ ပို့ပါ ငါမိသားစုမှ ငါဆွေးမျိုးမှ ဆိုတဲ့စိတ်လေးမထားမိပါစေနဲ့ ဘာပေးလို့
ဘာရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လည်းမထားမိပါစေနဲ့ရှင်..လမင်းတွေ့ ဖူးတဲ့ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူချမ်းသာအောင် မေတ္တာပို့တာတဲ့ရှင်..
ဈေးရောင် ကောင်းအောင် ငွေဝင်အောင်ဆိုလာပဲ လမင်းအံအော်မိတယ်။။
မေတ္တာပို့နည်းလေး လမင်းဖတ်ဖူးသမျှလေး မျှဝေမေးမယ်နော် .ပထမဆုံး မီမီကိုယ်ကို အရင်စပို့ပါ ပြီးရင်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ပို့ပါ။။
နောက် ကိုယ်မုန်းတဲ့ မကျေနပ်တဲ့သူကိုပို့ပါ ကိုယ်ကိုအန္တရယ်ပေးတက်တဲ့ သူကို ပို့ပေးပါ စိတ်ကိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေတ္တာပို့တဲ့
စိတ်မျိုးထားပေးပါ ဒါမှ ကိုယ်လိုသူကို ချမ်းသာစေချင်ရောက်မှပေါ့။။။။
မုန်းသူကိုအရင်စပို့ရင် မေတ္တာစိတ် ချက်ချက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဒါကြောင့် မိမိ ကိုယ်ကိုကိုယ် အရင်မေတ္တာပို့ရခြင်းပါ။။။
ကွယ်လွန်သူတွေကိုလည်း သီသန့်မေတ္တာမပို့ရပါဘူး ကိုယ်ပြုလိုက်တဲ့ ကုသိုလ်တွေကိုသာ အမျှဝေပေးပါ...
လိင်ကွဲပြားသူ တွေကိုလည်း မေတ္တာ မပို့ရပါဘူး မေတ္တာအစား ရာဂစိတ်တွေဝင်လာနိုင်ပါတယ်။။
အမျိုးသမီးများဆို လိင်တူပဲ အရင်စမေတ္တာပို့ရပါမယ် ယောင်္ကျားလေးများလည်းအတူတူပါပဲ မေတ္တာပို့ရချင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က
ရှိသမျှ လုံးစုံ သတ္တ၀ါအားလုံးဘေးရန်ကင်းစေချင် ဆင်းရဲကင်းစေချင် အန္တရယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေစေချင်ဆိုတာတွေကို ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ
ပွားများချင်လို့ အတိုချုပ်အားဖြင့်သိစေချင်ပါတယ်....လမင်းတို့ မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓ ဘာသာတွေဟာ အပြောကသာ မေတ္တာ မေတ္တာနဲ့
အလုပ်ကြတော့ မပါကြဘူး အားနည်းကြတယ် ဥပမာ လူတစ်ယောက် ဒုက္ခ ရောက်နေတာတွေ့ ရင် ကူညီဖို့ထပ် ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဆို ပြီးလှည့်
ထွက်သွားကြတာများတယ်။။။။။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မေတ္တာ တရားထားစေချင်ပါတယ် စာနာပေးကြပါ တက်နိုင်သလောက်ကူညီပေးကြပါ...
ဒါမှမေတ္တာ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှာပါ ကမ္ဘာကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းမယ် ကမ္ဘာဆိုကြီးကျယ်နေမလာပဲ ကိုယ်တိုင်းပြည် ကိုယ်လူမျိုးတွေ
အေးချမ်းစေမှ အမှန်ပါပဲရှင် အပြောအနေနဲ့လည်း မေတ္တာပို့ပါ အလုပ်လေးလည်းပါကြပါလို့ လမင်းပြောချင်ပါတယ်..
လမင်းရေးတာ လိုအပ်ပါက လမင်းရဲ လိုအပ်ချက်ပါ စေတနာနဲ့ ရေးသာချင်ဖြစ်လို့ မေတ္တာထားပြီး နားလည်နိုင်ကြပါစေ..
သူငယ်ချင်းများကို နားလည်အောင်မရေးနိုင် သဘောမပေါက်ဖြစ်ခဲ့ရင် လမင်းညံ့လို့ပါ.....
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေလို့ တကယ်မေတ္တာစိတ်ရင်းနဲ့ ပို့သလိုက်ပါတယ်။။။။။။။။။
သူငယ်ချင်းတို့ရော လမင်းရော လူပီသပြီးလား ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ..
ဘယ်အရာတွေက လမင်းတို့ကို လူပီသ စေတာလဲ သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘယ်လိုအရာတွေက
လူပီသတယ် ထင်မိလဲ လူဖြစ်ရတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကိုရော ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်မေးဖူးလား......
လမင်း တရားနားရင် အသိလေးတစ်ခု ရလိုက်လို့ ဒီပိုစ့်လေးရေးပြီး သူငယ်ချင်းများကို လမင်း အသိလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
လူပီသနည်း သုံးမျိုးရှိတယ်လို့်ဆရာတော်က ဥူးသုမင်္ဂလ ဟောပြောဆုံးမဖူးတာ မှတ်သာဖူးတယ်ပါ.....
(၁) ကိုယ်ချင်းစာ တရားရှိရမယ် ...
(၂)မေတ္တာ သနားဂရုဏာ ထားတက်ရမယ်...
(၃)ဆင်ခြင်ညဏ် ရှိရမယ်တဲ့ အကောင်းအဆိုး ဝေဖန် နိုင်တဲ့ အသိညဏ်ပေါ့..
သူငယ်ချင်းတို့ ဘယ်လိုထင်လဲ ဆရာတော်ပြောသွားတာ လမင်းအရမ်း ကြိုက်တယ်....
လူတစ်ယောက်မှ ကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိဘူး ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်နေရင် ဘယ်လိုလူလို့ခေါ်တော့မလဲနော်
လူဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိရမယ် ...
မေတ္တာတရားလည်းထားနိုင်ရမယ် သနားဂရုဏာလည်း ရှိတက်မှ လူပီသတာပါ...
ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတယ် မေတ္တာတရားလည်းထားနိုင်တယ် သနားကြင်နာမူလည်းရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ အကောင်းအဆိုး အကြောင်း အကျိုးကို သိရှိတဲ့ အသိညဏ်မရှိရင်လည်း လူတော့လူပဲ လူပီသတယ်လို့တော့ပြောလို့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သုံးဆယ်တစ်ဘုံမှ လူဆိုတာ အသိညဏ် အရှိဆုံးသတ္တ၀ါ ဖြစ်နေလို့ပါ....
လူဖြစ်ရတာ ကုသိုလ်ကံ အရမ်းကောင်းလို့ ဖြစ်ခွင့်ရတာပါ လူဖြစ်လာကြတဲ့ လမင်းတို့ သူငယ်ချင်းတို့
လူပီသပြီးလာ ဘာတွေလုပ် ပြီးပြီလဲ ။။
လူဖြစ်ခွင့်ရတုန်း မှာ အချိန်တွေကို မဖြုန်းစေချင်ပါဘူး ယခု ဘ၀ နောင်သံသရာ အတွက် ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ။။။။
အခု အချိန်ဟာ လမင်းတို့ အတွက် အကောင်းဆုံးလူပီသဖို့ လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပါ...
သာသာနာ နဲ့ကြုံတွေ့နေတယ် သိတက်တဲ့ အသိညဏ်လည်း ရှိနေတယ် ဆို လူပီသဖို့ နည်းလမ်းတွေ့ အများကြီးပါ
လူအချင်းချင်း ကူညီကြပါ စာနာပေးကြပါ တစ်ကိုယ်ကောင်းအလုပ်မျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့
တရား နားယူကြပါ သူတော်ကောင်းတရား လိုက်နာကျင့်သုံးကြစေချင်ပါတယ်....
မေတ္တာတရားထားကြပါ သနားကြင်နာဖေမပေးကြပါ ။။။။။။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမရင် သူငယ်ချင်းများ အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..................
မင်းစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ ငါစာရေးလိုက်ပါတယ် ။လူတိုင်းမှာခံစားချက်အမှတ်တရဆို
ုတာတွေ ကိုယ်စီရှိတတ်ကြတယ် ။
မင်းမှာလည်းရှိမှာပဲ ။ မခံစားနဲ့လို့ မပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမယ့်
သတိရတာက ရပါ ၊သတိနည်းနည်းတော့ ထားစေချင်ပါတယ် ။
တစ်ချို့က တိုင်ပင်ဖေါ်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေထားပြီးရင်ဖွင့်တတ်ကြသေးတယ် ...
ဒါလဲ မကောင်းသေးဘူး ....
သူက ကိုယ်အနားမှာဘယ်လောက်ရှိပေးနေနိုင်မှာလည်း... သူမရှိတဲ့အချိန်
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ.... စဉ်းစားပါနော်.....
တကယ်တမ်းကိုယ်နဲ့ အမြဲရှိနေနိုင်တာက ကိုယ့်စိတ်ပဲရှိတယ်။
တကယ်တမ်းဖြစ်လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအားကိုကြရတာပါ .. ဘယ်သူမှ
အပေါ်ယံလောက်ပဲရမယ် ... နွံအိုင်ထဲမှာနစ်နေတဲ့သူအချင်းချင်း နင့်ကိုငါ
စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကိုအချိန်ဆွဲချင် သေးလား.... ရင်ဝ ကိုမြားမှန်တာကို
ဘယ်သူပစ်လဲ အရင်ရှာရမှာလား ...? မြားဒဏ်ရာကို ဆေးကုမှာလာ ......?
သေချာစဉ်းစားနော်........ စိတ်ချမ်းသာမယ့်အချိန်ဆိုတာ အခုပါ...........
နောက်နေ့မှမဟုတ်ဘူး... အခု လက်ရှိအချိန် မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ .....
သူများကိုလည်း အားကိုးစရာ မလိုဘူး... အခုလုပ်ရင်အခုစိတ်ချမ်းသာမယ်..
(သေချာစဉ်းစားနော်........ စိတ်ချမ်းသာမယ့်အချိန်ဆိုတာ အခုပါ...........
နောက်နေ့မှမဟုတ်ဘူး... အခု လက်ရှိအချိန် မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ......
အလင်းစေတမန် မှ သူငယ်ချင်းများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။။။။
်သူငယ်ချင်းတို့ရေး ဒီတစ်ခါ ကျေးဇူးတရားအကြောင်းလေး ပြောမယ်နော်...
ကျေးဇူးတရား ကိုသိနိုင်သလောက် ထားနိုင်သလောက် ဆပ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားသွားကြရအောင်နော်...
ဘယ်လို အရာတွေက လမင်း တို့အတွက် ကျေးဇူးတရား တွေကို ဖော်ကျုမလဲ တွေးကြည့် ကြမယ်နော်..
ပထမဆုံး လမင်း တို့ကို မွေးပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင် နစ်ပါး ကို အရင် ကျေးဇူးတင် တဲ့ စိတ်လေး ထားလိုက် ကြမယ်လေး
မနက်အိပ်ယာ နိုးလို့ မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မိဘ နစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးကို အရင်သိလိုက်ပါ။။။
ပြီးမှ လုပ်စရာ ရှိတာလေးကို လုပ်ကြည့်ပါ အလုပ်ထဲမှ လည်း ကျေးဇူးတင်တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ။။။
ကျေးဇူးတင် တက်ဖို့ပဲ လိုတာပါ ဥပမာ ကိုယ့်နဲ့ တွေ့ နေကြတဲ့ သူတွေ အလုပ်ရှင် အလုပ် သားသမား
သူငယ်ချင်း အစဉ်မပြေ မူတွေ အားလုံးဟာ ကျေးဇူးတရားတွေ ကြီးပါပဲ ....
လမင်း တစ်ခုလောက် ပြောကြည့်မယ်နော် ကိုယ်ချစ်သူ ကကိုယ့် အပေါ် သစ္စာ မရှိဘူးဆို ရင်စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့
အော် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ငါကံကောင်းတာပဲ ငါ အချစ်နဲ့ မထိုက်တန်လို့ပေါ့ သူလမ်းသူသွားပါစေ...
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ..အလုပ်ထဲ မှာဆိုလည်း အထက်လူကြီးက ကိုယ့်ကိုဆူ တာတို့ အလိုမကြ တာတို့
ဆိုလည်း အော် ငါကောင်းဖို့ ငါ့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ကိုထောက်ပြ တာပဲ ငါမှာ လိုအပ်တာတွေ ရှိနေတာပဲ ဒါလေးတော့
ငါပြင် လိုက်မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်လေး ထားကြည့်ပါနော်..အရမ်းစိတ်ချမ်းသာ ဖို့ ကောင်းပါတယ်..
နောက်တစ်ခုက သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့် အပေါ်မကောင်းကြံတာ တွေဆိုလည်း သူတို့ လုပ်တဲ့ ပေါ်မူတည်ပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ.. ကိုယ့်အသက်ရှင်နေတာလေး ကိုလည်းကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ..
အလုပ်လေး လုပ်နေရတာ အခုနေရတဲ့ ဘ၀လေး ဆုံတွေ့ နေကြတဲ့ မိသားစုလေး တွေ့ ကြုံနေတဲ့ အရာတွေ ဟာ
ကျေးဇူးတရားတွေ ကြီးပါပဲ ..မနက်လင်းလို့ အိပ်ယာက နိုးတာနဲ့ အော် ငါ ကျန်းကျန်မာမာနဲ့ အသက်ရှင်နေတာပဲ
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မေတ္တာ ပို့ပေးလိုက်ပါ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာလေး မှာ ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ အရာလေးတွေ ကို
အနည်းဆုံး (၅)ခု လောက်စာရွတ်ထဲချ ရေး ထားပါ...ညအိပ်ခါနီ ပြန်ကြည့်ပါ တစ်နေ့တာ ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ အရာတွေကို
ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ.. ကိုယ့် ကျေးဇူးတင်တဲ့ သက်ရှိ သက်မဲ့ အရာ တွေကို စိတ်ထဲကဖြူစင် သန့်ရှင်း
တဲ့ စိတ်လေးနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ...ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အများကြီးပေါ့နော် သူငယ်ချင်းတို့ ညဏ်ရှိသလို ပြူလုပ်
သွားပေါ့နော် အဲတော့ကျေးဇူးတရားလည်းသိရာရောက် စိတ်ကလေးလည်း ပြူပြင်ရရောက် စိတ်လေးလည်းငြိမ်းအေးပြီး
အရာအားလုံး ဟာကျေနပ် စရာတွေကြီး မြင်လာပါလိမ့်မယ်.. လောကကြီး ကတရားပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်လေးကိုပဲ
အရင်ပြင် ကြည့်လိုက်ပါ နေတက်ရင် ကျေနပ် စရာကြီးပါပဲ ကျေးဇူးသိတက်ရင်လည်း ကျေးဇူးတရား တွေကြီးပါပဲ...
ဘ၀မှ ခက်ခဲမူတိုင်း မှ ရင်ကျက်မူတွေရှိလို့ စိတ်ဓတ်မကျ ပါနဲ့ ကိုယ်အသက်ရှင်နေတာနဲ့ လူဖြစ်နေရတာတင် ကျေးဇူး
ကြီးမာနေပါပြီး ကျေးဇူးတင်စရာ ရှိတာကို မရှက်ပါနဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။။။
အားလုံးသော သူငယ်ချင်းများ ကျေးဇူးတရားသိရှိနိုင်ကြပါစေ........
အမှားပါရင် သည်းခံပေးကြပါ .............
သူငယ်ချင်းတို့ ကို လမင်း ဒီတစ်ခါ အရပ်ပြစ် ရှစ်ပါး အကြောင်းလေးမျှဝေ
မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုေ သြာဂါသဆိုပြီ ကလေး ဘ၀ထဲက အလွတ်ရလာ
ကြတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို သိတဲ့သူ ရှိသလို မသိသူများလည်း ရှိကြပါတယ်။
မသိသေးသောသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..
အရပ်ပြစ် ရှစ်ပါး အနက် အဓိပ္ပါယ်..
(၁)ငရဲ ချမ်းသာ အလျဉ်း မရှိသော အရပ်
(၂)တိရစ္ဆာန် မဂ်.ဖိုလ်မှ ဖီလာ ကန့်လန့်ဖြစ်သော သတ္တ၀ါ
(၃)ပြိတ္တာ ချမ်းသာသုခကင်းဝေး သော ဖုတ်.တစ္ဆေ စသော သတ္တ၀ါ
(၄)အသညဇော အရှုပဘုံ အသညသတ်ဘုံ..
(၅)ပစ္စန္တရော ရတနာသုံးပါး မတည်၍ ရိုင်းစိုင်းသော သူတို့ အရပ်.
(6)၀ိကလိနြိယ ပဋ္ဋိသန္ဓေအားဖြင့် ကျိုး ကန်း ဆွံ့အ သောသူအဖြစ်ရခြင်း
(၇)မိစ္စာဒိဌိ မှားသော အယူကို ယူသော မိစ္စာဒိဌိတက္ကဒွန်းဖြစ်ရခြင်း
(၈)ဗုဒ္ဓသုညော တိဟေတုကော ဘုရားမရှိသောအခါ ကာလ၌တိဟိတ်
လမင်းတို့ ယခု ရောက်ရှိနေသော ကာလသည် သာသနာနဲ့ ကြုံတွေ့ နေချိန်မှ မမေ့မလျော့မပေါ့မဆပဲ
ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်ကြပါစေလို့ စေတနာလေးနဲ့ လမင်းသိသလောက်လေး
အရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပြီး ကောင်းမူကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ကြပါ...... ။
ကြည်နူးစရာ့ မင်းတေးအလှကို ရပ်တန့်စေကာ
ဒီအမှန်တရား သစ္စာနဲ့ ပျယ်လွင့်စေပါ
အမြဲတမ်း အမှတ်တရ ရှိပါစေ
ရေးသူက ဆရာဖေမြင့်လို့ထင်ပါတယ်... စာရေးသူနာမည်မှားခဲ့ရင်
ခွင့်လွတ်ပေးပါ လမင်းကြိုက်လို့ သူငယ်ချင်းများကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
ရေးသူ နာမည်သိရင် ပြောပေးခဲ့ပါနော်
ငါးပါးသီလကို ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေး တရားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သီလဆိုတာ စည်းကမ်းဖြစ်လို့ လူတိုင် ဘာသာတိုင်နဲ့ စောင့်ထိန်းရမယ် အရာလို့ ထင်ပါတယ်။
(၁)ပါဏာတိ ပါတာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ...ဆိုတာသူတစ်ပါးအသက် ကိုသတ်ခြင်း
ရှောင်းကြဉ်ရတာ ဖြစ်လို့ အခုခေတ် သက်ဖြတ်နေကြတာဟာ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ။
(၂)အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ ဆိုတာကသူတစ်ပါးပစ္စည်း ကိုခိုးယူခြင်းလို ပြောပေးမဲ့
သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်နဲ့ ကြံမိရင်တောင် အဒိန္နာဒါနာ ကံမြှောက်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ ခိုးမူဆိုတာ မရှိရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။
(၃)ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ ကာမဂုဏ်တို့၌ ကဲ့ရဲ့ထိုက်အောင်
မှားယွင် ကျင့်သုံးနေကြသော လူလောက ကြီးမှာ ဘယ်လိုအေးချမ်းနိုင်ပါမလဲ...
(၄)မုသာဝါဒါ ဝေရမိဏိသိက္ခာ ပဒံ သမာဒိယာမိ မဟုက်မမှန်သောစကားကို ပြောဆိုခြင်းမှာ ရှောင်
(၅)သုရာ မေရယ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ သေရည်အရက်သောက်ခြင်းမှ ရှောင်
ကြဉ်နိုင်ကြရင်လည်း လောကကြီးမှ မကောင်းမူတွေ ကင်ဝေတာပေါ့နော်..
ပါဏာတိ ပါတာ ပြုလျက်သူ သူအသက်ကို သတ်သောသူသည်..
(၁)မျက်စီ နား နှာ အဂါင်္ ခြေလက် ချို့ယွင်းတက်ခြင်း.....။
(၂) ဖြစ်ရာဘ၀၌ ရုပ် အသွင် မွဲပြာခြောက်ညှို့း၍ စိုစိုပြေပြေမရ်ှတက်ခြင်း။
(၅)ဘေးရန်ပေါ်ပေါက်လျင် ကြောက်ရွံ့ ခြင်း
(၆)သူများသတ်တာ ခံရတက်ခြင်း ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အဆိပ် စသည်စားလျှက် သေရခြင်း
(၉)အသက်တိုတက်ခြင်း များပြားလှတဲ့ အပြစ်တွေ ခံစားရတက်ပါတယ်။။။။။။
အဒိန္နာဒါနာ ပြုသူသည် ဥစ္စာနည်း မွဲ ဆင်းရဲတက်သည် လိုရှိမရ ဘောဂပျက်စီး ရေ မီးသူခိုးမွေခံဆိုးနှင့် မင်းဆို
အပြား ရန်မျိုးငါးကြောင့်ပျက်ပြားဥစ္စာ အပြစ် များစွာသည် ၊ရှောင်ခါအပြန် အကျိုးတည်း။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ မိစ္ဆာစာရ ကျုးလွန်ကလည်း မုန်းကြသူများ ရန်သူပွား၍ ရှားပါးလာဘ်တိတ် ချမ်းသာဆ်ိတ်၏
က္ကုတိပဏ္ဍုက် မျိုယုတ်ခါခါ မျက်နှာမလှ အရှက်ရလျက် လက္ခဏနြေ္ဒ ယွင်းသွေ ချို့သိမ့် စိုးရိမ်များစွာ ချစ်သူကွာသည် ၊
ရှောင်ခါ အပြန် အကျိုးတည်း။
မုသာဝါဒါ ကျုးလွန်ကာ စကားမပီ သွားမညီ ပုပ်ညှီ ပါးစပ် ခြောက်ကပ် ကိုယ်ရေ က္ကုနြေ္ဒနောက် ပုံယွင်း
ဖောက်၏ မရောက်သြဇာ နှုတ်လျှာ ကြမ်းထော် လျှပ်ပေါ်လော်လီ စိတ်မတည်သည် ရှောင်ကြဉ် အကျိုးတည်း။
သုရာ မေရယ ကျုးလွန်ကာ သင့်မသင့်၌ ရေးခွင့်မသိ ပျင်းရီမေ့ရှုး ကျေးဇူးမဆပ် ဟိရောတ္တပ်ကင်း ခပင်းများထို အကုသိုလ်
ကိုပြုကျင့်လွယ်၏ ရှောင်ခါ အပြန်အကျိုးတည်း။
၀တီအကျဉ်ချုပ်လိုက်တာပါ.... ငါးပါးသီလသည် အခုဘ၀ နှောင်သံသရာ အတွက်ပါ အကျိုးများ၍ ရှောင်ကျင်
လိုက်နာသင့်သော လူစည်းကမ်း ပါ.။
သေရည်အရက်သောက်စားခြင်းသည် လေးပါးသော အပြစ်ကို ကျုးလွန် ဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါတယ်...
ကမ္ဘာကြီးကို အေးချမ်းမူမပေး နိုင်ရင်တောင် ကိုယ့်နဲ့ ပက်သက်သူတွေ အေးချမ်းစေ မှာပါ။
ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ပက်ဝန်ကျင် မိသာစု တိုင်းပြည် မြို့ ရွာ အေးချမ်းစေပါတယ်။။။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့ လမင်းရဲ့ ခံစားချက်လေးကို ပြောကြည့်မယ်နော်..
အိမ်ထောင်ရေးဆို လမင်းတို့ သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ မနီးသေးပေမဲ့
အရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ လူတိုင်း အချစ်တို့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာနဲ့ ထိတွေ့ ကြမှပဲလေး
လမင်းပြောချင်တာက အခုလို လမင်းတို့ သူငယ်ချင်းတို့ အရွယ်တွေမှာ စိတ်ထားမမှားဖို့နဲ့
အိမ်ထောင်ရေးခေါင်းစဉ် တပ်ထားတော့ လမင်းအိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းလေးပြောကြည့်မယ်နော်
အိမ်ထောင်တစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင် နားလည်မူတွေ ကိုယ်ချင်စားမူတွေ သစ္စာတရားဆိုတာတွေကို
မမေ့စေချင်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုခေတ်ကိုက ချစ်ကြတာ လမ်းခွဲကြတာအရမ်းကိုမြန်ကြပါတယ်။။
အိမ်ထောင်တစ်ခုမထူထောင်ခင် သေချာစဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ စိတ်အလိုမလိုက်မိပါစေနဲ့ စိတ်ဆိုတာ မျိုးကကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်တာရှားလို့ပါ ။။။
လမင်းရဲ့ စိတ်ခံစားချက်လေးပြောကြည့်မယ်နော် လမင်း မေမေ နဲ့ဖေဖေက အိမ်ထောင်ကွဲနေကြတာပါ
တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ မေမေက အဘွားစကားနားထောင်ပြီး ဖေဖေနဲ့ လက်ထပ်ကြတာပါ။
ပြဿနာကတော့ မချစ်မနစ်သက်ရင် မယူကြပါနဲ့ မိဘစကားနားထောင်ပြီးယူလိုက်ကြပြီး အိမ်ထောင်ရေး
ကွဲကြရင် သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲ ဒဏ်ရာ အနာတရ တွေဖြစ်စေပါတယ်။။။
သားသမီးဆိုတာ မိဘကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး မိဘကတော့သားသမီးကိုမယူလိုရပါတယ်။။
မိဘတွေရဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ ကိုခံရစမြဲပါ.. လမင်းပြောချင်တာက သူငယ်ချင်းတို့လည်း တစ်နေ့
ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လမ်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လျှောက်လှမ်းစေချင်ပါတယ်။။။
နောက်လာမဲ့ ဘယ်သားသမီးမှာမှ လမင်းလို စိတ်ဒဏ်ရာ မရစေချင်လို့ ဒီပိုစ့်လေးရေးမိတာပါ။။။
အိမ်ထောင်ရယ်လိုပြုလိုက်ကြပြီးရင်လည်း စိတ်အလိုကိုမလိုက်မိကြပါစေနဲ့ ကိုယ်ထူထောင်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို အတက်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်းကြပါ။။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့ လမင်းတို့မှာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလို့ပါ လမင်းတို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေမှာတော့
ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး မိဘတွေ ကောင်းသည် ဖြစ်စေ ဆိုးသည် ဖြစ်စေ သားသမီးတွေပဲ ခံစားရတာပါ။။။
လမင်းတို့ မေမေ နဲ့ ဖေဖေ လမ်းခွဲလိုက်တုန်းက လမင်းညီမလေးဆို မူးတောင်လဲရှာတာပါ။။။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမလေးက ဖေဖေကို အရမ်းချစ်တာလေး အခုဆို အဲစိတ်လေးနဲ့ နှလုံးရောဂါသည်လေး
လမင်းကတော့အိမ်မှ သမီးအကြီးဆိုတော့ ရင်ထဲကဒဏ်ရာတွေကို မျိုသိမ့် ထားရတာပေါ့ ။။။။။
မေမေက မာနကြီးသလို ဖေဖေကလဲ အရွဲ့တိုက်တက်တယ်လေး လူကြီးတွေရဲ့ မာနတွေ အာဏာတ တွေကြောင့်
သားသမီးတွေ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာ မေမေ တို့ ဖေဖေ တို့တွေးမိချင်မှ တွေးမိကြမယ်။။။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းကကိုယ်ဖြစ်နေတာကို ပြန်တွေးမိတာရှားလို့ပါ ။။။။
ထားပါလေး လမင်းတို့ မိသားစုပြဿနာက ဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့ ဘာမှမတက်နိုင်ပေမဲ့ လမင်းတို့ သူငယ်ချင်းတို့
တွေ မှအဲလိုဖြစ်မလာအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။။။။
အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ထောင်တော့မယ်ဆို သေချာ စဉ်းစားကြပါ ညှီနိုင်းကြပါ တိုင်ပင်ကြပါ
ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း တည်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်း ကြပါ တန်ဖိုးထားကြပါ။။။။
အိမ်ထောင်ရေး ကွဲကြတဲ့ မိသားစုက ဆင်တက်လာတဲ့ သားသမီးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အားငယ်လာမယ်
လူကြောက်လာမယ် သိမ်ငယ်လာမယ် အလိုမကျမူတွေဖြစ်လာမယ် ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးလာမယ် ...
သူ့ဘ၀ကိုအလိုမကျတော့ စိတ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်မယ် ။။။။
အဲပြဿနာရဲ့ အကြောင်းရင်က သူ့ကိုသူ့ ဖုံကွယ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လူတွေအထင်သေးမှာကို ကြောက်ပြီး
လမင်းကတော့ အဲလိုမဟုက်ဘူး အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာကို ကြောက်လာသလို အချစ်ဆိုတာကိုလည်း
အမှန်းဝန်ခံ ရရင်တော့ လမင်းလည်းလူနည်းနည်းတော့ကြောက်တက်တယ် အားငယ်စိတ်ရှိတယ်။
လမင်းညီမလေးကတော့ သူထင်ရာကို သူလုပ်နေတော့တာပဲ နှလုံးရောဂါလေးကလည်းရှိတော့ မေမေလည်း
အခုလို တွေ ဖြစ်တော့ ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲရတာပဲမလား ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ တွေရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို လမင်းတို့ လိုစိတ်ဒဏ်ရာ မဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ လမင်းဒီပို့စ်လေးရေးရခြင်းပါ။။။
လမင်း အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာကို သိပ်တော့နားမလည်းပါဘူး လမင်းမိဘတွေ ကြုံတွေ့တာလေးနဲ့ပဲ လမင်း
အိမ်ထောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူ ရည်းစား ဘ၀မှပဲ ဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိကြပါ နားလည်မူယူပါ စိတ်အလိုကိုမလိုက်ပါနဲ့ ဘာပဲလုပ်လုပ် မလုပ်ခင်သေချာ စဉ်းစားပါ ။
ကိုယ့်အတွက် မိသားစု အတွက် ကိုယ့်ပက်ဝင်ကျင် အတွက် ကိုယ်အနာဂတ်အတွက်
ဆုးံဖြတ်ချက် မချခင် အခါခါ အထပ်ထပ် စဉ်းစားပါ ခေါင်းဆေးအေးထား ဆုံးဖြတ်ပါ။။။
ဒါဆို သူငယ်ချင်းတို့ မှာ မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတစ်ခုရမှာပါ ရလာာတဲ့အဖြေကလဲ ကိုယ့်အတွက်ဆိုတာထပ် ကိုယ်မိသားစု အတွက်ကို ဦးစားပေးပါ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်တော့ မှားတက်ပါသေးတယ်။။။။
ဒီလောက်ပဲပေါ့နော် လမင်းသိသလောက်လေးနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော မိသားစုဘ၀လေးကို စေတနာထားပြီး
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ အနာဂတ်လေးမှ မှန်ကန် ကောင်းမွန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေမှ လမင်းတို့ ညီမတွေလို စိတ်ဒဏ်ရာ မရပါစေနဲ့လို့ ဆန္ဒ ပြုလိုက်ပါတယ်။။။။။။။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ပျော်ရွင်သောဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ........
နင်နဲ့ တွေ့ ဆုံရလို့ငါပျော်ရွင်ခဲ့ ဖူးတယ်...
နင်ငါကို ချစ်တယ် ထင်လိုပီတိဖြစ်ခဲ့ ဖူးတယ်..
နင်ရက်ရက် စက်စက် လှည့်စားခဲ့ တယ်
နင်ကျေနပ်လား နင်ကျေနပ်ရင် ငါပျော်ပါတယ်..
နင်ငါကို မချစ်ပဲနဲ့ တော့ ငါနဲ့ အဝေးဆုံးကို
ငါဘက်ကို လှည့်မကြည့်နဲ့ နင့်သဘောကျ
နင်ဘ၀ကို နင့် တည်ဆောက်ပါ
ငါနှလုံးသား ဆေးပန်းချီ ရေးဆွဲမပြီးခင်
နင်ငါကို လှည့်စားခဲ့ တယ်..
နင်င့ါအချစ်တွေနဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့ ဘူး....
ငါမာန ကိုနင် အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ချိုးခဲ့ တယ်...
ငါကို မချစ်ပဲ ချစ်တယ် ပြောတဲ့ နင့်ကို ငါ မုန်းတယ် ..
ငါနဲ့ ပက်သက်ပြီး နင် အမြဲဟန်ဆောင်ခဲ့ တယ်..
နင့်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မူတွေ ပီပြင်လွန်လို့ငါ ရှူးသွပ်ခဲ့ရတယ်...
နင်တော်ပါတယ် ငါညံ့ခဲ့ တယ် ...
တစ်ခုတော့ ပြောမယ် နင်ပျော်မယ်ဆို ငါကျေနပ်တယ်....
ငါနင့်ကို အရမ်းချစ်ခဲ့ တယ် လှည့်စားခဲ့ တာ သိလို့ 
နင်ငါ့ ဘ၀ထဲကို ဟန်ဆောင်မူတွေနဲ့ ရောက်လာခဲ့ တယ်...
ငါနင် နဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးတဲ့ ဒီကဗျာဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်မှာပါ..
နောက်ထပ် နင့်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မတွေးတော့သလို......
သေချာတယ် ငါ နင်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှာ မလွမ်းတော့ဘူး...
စာရေးသူ/ လမင်းငယ် /နေ့စွဲ/ Wednesday, October 05, 2011
ကဲသူငယ်ချင်းတို့ရေ ပျင်းနေရင် ဒီမှာလာပြီး
တီးဖို့ ခတ်ဖို့လုပ်ထားပါတယ် မောက်လေးနဲ့ရမ်းပြီးတီးလို့ရပါတယ်